जनस्वास्थ्य सरोकार, भक्तपुर । भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले सोमबारसम्म ८०० जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको छ । विसं २०६९ माघ ६ गतेदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु गरेको यस केन्द्रले नौ
अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिमा ४ जना चिकित्सक मनोनित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । सरकारले अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको अध्यक्षमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जकी डीन प्रा.डा. दिव्या सिंहलाई दोस्रोपटक पनि अध्यक्षमा मनोनित गरेको छ । यसैगरी सरकारले प्रा.डा. प्रेमराज
जनस्वास्थ्य सरोकार, मुग्लिन । दुवै मिर्गौला फेल भएका चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–३ चैवुङका १९ वर्षीया शर्मिला गुरुङको उपचारका लागि रु ११ लाख ८५ हजार रकम सङ्कलन भएको छ । सामाजिक अभियानकर्मी
दश वर्षको अवधिमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले ५०६ जनामा सफलतापूर्वक मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेको छ । सो अस्पतालले नेपालमा पहिलोपटक २०६५ साउन २४ मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेको थियो । प्रत्यारोपण
विशेषगरी नेपालीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने र मिर्गौलामा समस्या भएको अन्तिम अवस्थामा मात्र हस्पिटल पुग्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । यस्तो अवस्थामा मिर्गौला ट्रान्सप्लान्टको विकल्प हुँँदैन । दुवै मिर्गौला फेल